पशुपतिमा घटेको एउटा अनौठो घटना ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पशुपतिमा घटेको एउटा अनौठो घटना !
यो समाचार पनि पढ्नुहोस असार, मध्य वर्षायाम । अर्थात दही–चिउरा खाने दिन । असार पन्ध्रमा सबैले चिउराको व्यवस्था गर्छन्, दहीको जोहो गर्छन् । यसमा कतिले मौसमी फल आँपको स्वाद मिसाउँछन्, कतिपयले केरा । घर–घरमा दही चिउरा खाइन्छ ।
आज गुरु पुर्णिमाको दिन लाग्दैछ वर्षकै तेस्रो चन्द्र ग्रहण, यी ५ राशिलाई हुनेछ अशुभ!